Talo la xiriirta gobolka Banaadir oo loo jeediyey madaxda DF - Caasimada Online
Home Maqaalo Talo la xiriirta gobolka Banaadir oo loo jeediyey madaxda DF
Talo la xiriirta gobolka Banaadir oo loo jeediyey madaxda DF
8dii bishii 2aad waxaa dalka doorasho rabitaan shacab lagu doortay Madaxweyne Farmaajo iyadoo shacabka Soomaaliyeed ay muujiyeen farxad wayn oo dal iyo dibad.
Waxaan anigu kamid ahaa shacabkii isbedelkaa ku faraxsanaa taasoo aan aragti ahaan ii muuqatay in laga maarmaan ay tahay in lahelo dowlad katurjimaysa rabitaan shacab.
Dulucda hadalkayga –
Mudane Madaxweyne iyo Mudane Reysul wasaare dalku waa federaal tastuurkiisanu waa qabyo, waxaan jeclaan lahaa in aad ila wadaagtaan talooyinkan:-
Muqdisho waa caasimadda umadda Soomaliyeed waana magaalo ay ku nool yihiin shacab lagu qiyaasay 4milyan.
Muqdisho waxay tabanaysaa cadaalad darro taasoo ay tabanaysay muddooyinkii lasoo dhaafay.
Muqdisho waxay leedahay xildhibaano katirsan dowladda dhexe kuwaasoo kaduwan kuwii horay u matali jiray.
Waxaan wada tashiyo iyo kulamo badan kadib aan jeclaystay in taladaaa ay ila wadaagaan madaxda taasoo aan rajjaynayo in ay gaari doonto.
Muqdisho waxaa maamulkeeda laga xiray Accounkii iyadoo aan laxirin Acconnadii gobollada kale ee dalka maadama ay maamul ahaan ama Dowlad goboleed ahaan awood qaybsiga ay xuquuqdooda ku heleen, halka Muqdisho ay helin cadaaladda ay heleen gobollada dalka cadaaladdaa ay heleen.
Waxaan si cod dheer ah ugu gudbinayaa madaxda sare dalka in wax waliba ee quseeya caaaimadda Muqdisho laga samaynayo ay xuquuq u leeyihiin Xildhibaannada kasoo jeeda iyo tallaabo waliba ee kusaabsan hoowlaha gobalka banaadir.
Hadii madaxda dalka aysan wada tashiyo lasamayn Xildhibaannada kasoo jeeda gobolka banaadir waxay dhalin doontaa sharci jabin kamid ah taatuurka dalka taasoo aanan u wanaagsanayn hagaajinta iyo awood qaybsiga dalka.
W/Q: Hassan Abdikadir Mudey.